Fogee Module Kaamerada, Module Kaamerada Dijitaalka ah - Viewsheen
58X OIS 6.3 ~ 365mm 2MP Shabakad Dheer oo Dheer ...
35X Zoom iyo 640 * 512 Thermal Bi Spectrum Dual S ...
VOx 1280 * 1024 oo ah Khadka Digniinta Shabakada ee ...
80X 15 ~ 1200mm 2MP Shabakad Dheer Ultra Range Zoom ...
90X 6 ~ 540mm 2MP Shabakad Sheeko Dheer oo Dheer ...
86X 10 ~ 860mm 2MP Shabakad Dheer Ultra Range Zoom ...
50X 6 ~ 300mm 4K Shabakad Sheeko Dheer oo Dheer ...
50 × 4MP Starlight Laser 800m Shabakada Xawaaraha Xawaaraha ...
30X 2MP iyo 640 Heerkulka Dual Sensor Drone Camer ...
Waxbadan Ka Baro CST
Khibrad R & D. Kooxda asaasiga ahi waxay ka yimaadeen ganacsi caan ah, oo celcelis ahaan 10 sano khibrad ah.
Nidaamka silsiladda oo dhameystiran, khadadka wax soo saarka ee jaango'an iyo xakamaynta tayada adag waxay hubineysaa kalsoonida sheyga.
Macaamiilku wuxuu udub dhexaad u yahay, sii adeegga OEM / ODM
Codsiga 3-dhidibka stabi ...
Dhaqan ahaan, kormeerka waddooyinka ayaa ku saleysan IPC, ITC, Dome iyo qalab kale si loo gaaro kormeerka waqtiga dhabta ah ee gawaarida. Xalalkan waxaa la isticmaali jiray sanado badan waana qaangaadhin ...
Faa'iidada zoom dheer ...
Marka laga hadlayo la socoshada masaafada dheer, habka soojireenka ah waa in loo adeegsado muraayadaha cctv ee mootada sida Fujifilm iyo IPC. Labadii sano ee la soo dhaafay, iyadoo la adeegsanayo kaameradda dhererka dhererka dhererka dhererka, ...
OIS iyo EIS ee zoom block c ...
Hordhac Xasilinta kamaradaha waxqabadka dijitaalku waa bislaaday, laakiin kuma jirto muraayadaha kamaradaha CCTV. Waxaa jira laba waji oo kala duwan si loo yareeyo saamaynta gariir-kaam. Isticmaalka xasilinta muuqaalka indhaha ...
NDAA u hoggaansamida zoom block c ...
Aragtida Sheen waxay bixin kartaa kamaradaha xakamaynta zoom ee NDAA. Hordhac Arag Sheen Mstar zoom kaamirooyinka xannibaadda ayaa 100% u hoggaansamaya NDAA. Hadaad maqashay USA b ...
Codsiga elektiroonigga ah ...
Waxaa jira laba nooc oo farsamada defog ah. Aragtida guud Guud ahaan, 770 ~ 390nm iftiinka muuqda kama gudbi karo ceeryaanta, si kastaba ha noqotee, infrared wuxuu mari karaa ceeryaanta, maxaa yeelay waxaan ...